Garoowe: Ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay qaar ka mida fuliyayaashii weerarkii shalay. – Radio Daljir
Abriil 8, 2011 12:00 b 0
Garoowe, April 07 – Ciidanka bilayska Puntland ayaa hawlgal ballaaran oo ay maanta (Khamiis) ka fuliyeen bannaanka Garoowe waxa lagu dilay mid ka mid ah dadkii ka dambeeyay weerar shalay ka dhacay Garoowe ee lagu dilay Alle ha u naxariistee Maxamed Yaasiin Ilkacase, sidoo kalena ay ku dhinteen isaga iyo labadiisii waardiye.
Sida aan ka helayno saraakiil sare oo ka tirsan bilayska kana xaqiijinay ilo kale oo madax-bannaan, waxa haatan qaybta bilayska ee Garoowe ku xiran laba ka mid ah dadkii gaystay weerarkii shalay. Labada qof ee la soo qabtay ayaa mid ka dhaawacmay qaarka hoose, halka kan kale uu bad-qabo. Wararku waxa ay intaa ku darayaan in uu baxday ugu yaraan nin ka mida raggii ay ciidanku ku daba-joogeen, kaasoo wali la baadi-goobayo.
Guud ahaan waxaa la adkeeyay ammaanka magaalada, iyada oo si gaar ahna ciidamo dheeraad ah loo keenay xabsiga ay ku xiran yihiin ragga la soo qab-qabtay.
isla caawa ayay guddiga nabad-galyada ee gobolka shir ay ku yeesheen Garoowe waxa ay ka soo saareen qodobo adag oo lagu adkeeynayo ammaanka. Guddoomiyaha gobolka oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in la mamnuucayo socodka iyo makhaayad fariisiga xilliyada dambe ee habeeynkii.
Shalay ayay ahayd markii rag hubaysan kana tirsan ciidamada ammaanka ay weerar khasaare badan ka gaysteen bartamaha magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Weerarkas ayaa lala bartilmaameedsaday Maxamed Yaasiin Ciise ‘Ilkacase’ oo halkaa ku dhintay. Waxa sidoo kale weerarkaas ku dhintay laba kamida ilaaladiisii, iyada oo ay gabar goobta joogtayna ay ku jirto xaalad aad halis u ah, laguna daweeynayo isbitaalka guud ee Garoowe.
Garoowe, April 07 – Warar horudhac ah oo ka soo baxaya howlgallo baaxad wayn oo ay ciidamada ammaanka ka fuliyeen buuraha bannaanka ka ah magaalada Garoowe ayaa sheegaya in lagu dilay mid ka mida raggii fuliyay weerarkii shalay.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Daljir u sheegay in ka sokoow ninka dhintay haddna la qabtay mid ka mida dhagar-qabayaasha, halka intii kalena lagu meeraysan yahay, looguna baaqay in ay is dhiibaan.
Ciidamo badan oo xoojin ah ayaa la sheegay in ay goobta ku sii qulqulayaan sifo ay u hubiyaan in ayan cidina ku hambaasin in loo soo gurmado, ciddii isku daydana si fudud oo khasaare yar loo xakameeyo.
Madaxda gobolka iyo saraakiisha gobolka Nugaal ayaa shalay sheegay in ay garanayaan ragga fuliyay weerarkaas, isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan.
Daljir kala soco wixii ka soo kordha howlgalka ciidamada ammaanka.
Idadacada Daljir. http://daljir.com/
Boosaaso/Garowe: Qaar kamid ah barakacayaasha oo ka cabanaya nolol xumo soo foodsaartay.
Baahin: Khamiis, Apr 07, Weriye Axmed M. Nadiif ~ Daljir ~ Buuhoodle. Garowe: Ciidamada bilayska oo gacanta ku dhigay gacan-ku-dhiiglayaal dad ku laayey Garowe; Gudd. gobolka Nugaal ayaan waraysanay … Garowe: Issimada Puntland oo ku baaqay in la iska-kaashado adkaynta amniga; Garaad C/llahi Cali Ciid ayaan waraysanay … Xudun: Warbixin ku saabsan saamaynta abaaraha; Duqa degmada Xudun ee gobolka Sool ayaan waraysanay … Buurtinle: Warbixin ku saabsan saamaynta abaaraha ee dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Buurtinle & nawaaxigeeda …